चनाको दाल खानुका फाइदाहरु
– डायबिटिज नियन्त्रणको लागी चनाको दालको सेवन धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ । यसले ग्लुकोजको अत्याधिक मात्रालाई सोस्नपनि धेरै नै....
बालबालिकाको आँखा कमजोर हुँदै गएको कसरी थाहा पाउँने ?
बच्चाहरु धेरेजसो टेलिभिजन, ल्यापटप, मोबाइल, ट्याबलेटमा गेम खेल्न वा भिडियो हेर्न रुचाउँछन् । यही कारण अहिले अधिकांश बच्चाको दृष्टि कमजोर हुने सम्भावना बढ्दो छ ।
बच्चाहरु सागपात खान मन पराउँदैनन् यसको कारण पनि दृष्टि कमजोर हुँदै जान्छ । धुलो–धूँवाले पनि बच्चाको आँखामा असर पुर्‍याइरहेको....
कोशी अस्पतालमा रेबिज इन्जेक्शनको अभाव हट्यो
विराटनगर । विगत एक महिनादेखि विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पतालमा अभाव भइरहेको रेबिजको इन्जेक्सनको अब भने बिरामीले प्रशस्त रुपमा लगाउन पाउछन् । अस्पतालले सूचना प्रकाशित गरेर उक्त अभाव हटेको जनाएको छ ।
कोशी अञ्चल अस्पतालमा मासिक ७ सय ५० भाइल कुकुरले टोकेको इन्जेक्सन उपलब्ध हुने....
यस्ता फल एकै साथ सेवन नगरौं
फल स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ । तर, फलफूमा अर्को विजातिय खानेकुरा मिसाइयो त्यो विषाक्त हुन जान्छ ।
कुन फलसँग के खानेकुरा मिसाउनु हुँदैन यसबारे जान्नैपर्छ । खासगरी बालबालिकाको सवालमा यस्तो कुरामा जान्नु एकदमै जरुरी हुन्छ ।
सुन्तला र गाजर
सुन्तला र गाजर....
यस कारण दाँत खप्टिएर आउँछन्
गुलियो बालबालिकालाई सार्‍है मन पर्ने खानेकुरा हो । तर गुलियो खानेकुरा खाँदा दाँतमा टासिन्छन् । मुखमा भएको ब्याक्टेरियाले त्यहाँ एसिड अर्थात् अम्ल उत्पादन गर्छ र दाँतलाई खियाउने गर्छ ।
यसले गर्दा खाएको खाना दाँतमा अड्किन्छ, क्याबिटी उत्पादन हुन्छ र दाँतमा किरा लाग्छ । नियमित....
स्क्रब टाइफस परिक्षण गर्ने किट अभाव
चितवन । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवनमा स्क्रब टाइफस रोग पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने ल्याब परीक्षणको किट अभाव भएको छ । कार्यालयका प्रमुख विजय झाका अनुसार थप किटका लागि विभागमा पत्राचार गरिसकिएको छ ।
चितवनमा गएको वर्ष गरिएको अनुसन्धानमा मुसा र माइटमा समेत टाइफस रोग....
हामीले खाएको खानेकुरा राम्ररी पच्यो भने शरीरमा पोषणको अभाव हुँदैन । शरीर स्वस्थ्य र तन्दुरुत हुनुका साथै रगत पनि सफा हुन्छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो छालाको सौन्दर्यमा पनि प्रभाव पार्छ ।
तर, हामीले जे जति खान्छौ, सबैकुरा पचाउन गाह्रो हुन्छ । कतिको पचाउने....
शरीरमा पानी कम भयो भने के हुन्छ ? थाहा पाउनहोस्
जब हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ तब शरीरले पानी....
सुन्दर हरैचामा देखियो अनौठो रोग,२ जनाको मृत्यु
इटहरी । मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा नयाँ रोगको प्रकोप फैलिएको छ । सुन्दर हरैचा नगरपालिका–५ स्थित फोक्लान टापुमा यो रोगको प्रकोप फैलिएको हो ।
गत असार ४ गतेदेखि त्यहाँका स्थानियहरुमा यो रोकको संकमण देखा परेको थियो । ज्वारो आउने, टाउको दुख्ने र रिँगाटा चल्ने....
स्वास्थ्य चौकी नबन्दा स्वास्थ्य सेवामा समस्या
संखुवासभा । जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण सुरु भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा भवन अभावका कारण दैनिक रुपमा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा समस्या भएको छ । निर्माणको जिम्मा पाएको खानी धुलीखेल हिमालय जे.वि.ले भवन निर्माणमा ढिलाई गरेपछि थप स्वास्थ्य सेवामा समस्या....
प्रदेश २ मा थप ७६ जनामा कोरोना पुष्टि
भारतमा कोरोनाबाट एकैदिनमा अहिलेसम्मकै धेरैको मृत्यु, संक्रमित पनि उच्च